Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Birao Mpanatanteraka Lufthansa: Mila fomba fijery mazava momba ny dia ataon'i Etazonia isika izao
Harry Hohmeister, mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG
Milatsaka ny isan'ny aretina satria nesorina ny fameperana ny fivezivezena any amin'ny firenena maro ary vokatr'izany dia mitombo be ny fangatahana tapakila fiaramanidina Lufthansa Group.
Ny fangatahana sidina USA dia mitombo hatramin'ny 300 isan-jato
Mitombo avo telo heny koa ny fangatahana any amin'ny toeran-kaleha any Eraopa
Ireo mpitsangatsangana dia manohy mankafy ny filaminana sy ny filaminana amin'ny famandrihana
Any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao dia mihabetsaka ny olona vita vaksiny. Milatsaka ny isan'ny aretina satria nesorina ny fameperana ny dia amin'ny firenena maro.
Ny lalàna fidirana alemanina dia namboarina ihany koa andro vitsy lasa izay. Ohatra, ny lalàna momba ny quarantine dia tsy mihatra amin'ny olona afaka maneho fitsapana ratsy Corona rehefa miverina avy any amin'ny faritra misy risika. Ankehitriny dia ekena ny fitsapana PCR manan-kery mandritra ny 72 ora ary ny fitsapana antigène manan-kery mandritra ny 48 ora.
Vokatr'izany dia mitaky ny fangatahana Vondrona Lufthansa mitombo be ny tapakilan'ny fiaramanidina.
Ohatra, tao anatin'ny tapa-bolana lasa dia betsaka ny fangatahana sidina fahavaratra mankany Etazonia noho ny volana lasa teo. Ny fifandraisana amin'i New York, Miami ary Los Angeles dia nahitana fiakarana hatramin'ny 300 isan-jato. Noho izany, ny zotram-piaramanidina an'ny Lufthansa Group dia mampitombo hatrany ny sidina mankany sy miverina any Etazonia hatramin'ny volana jona ary manidina amin'ny toerana mahaliana toa an'i Orlando sy Atlanta indray.
Harry Hohmeister, mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG dia nilaza hoe:
“Maniry mafy ny fialan-tsasatra sy fifanakalozana kolontsaina ny olona ary koa ny fiarahana amin'ny fianakaviany, ny namany ary ny mpiara-miasa aminy - ary, amin'ity lafiny ity, indrindra ny sidina manelanelana an'i Alemana sy Etazonia. Noho ny maha-zava-dehibe ny dia an-dranomasina transatlantika ho an'ny toekarena manerantany, dia mila fomba fijery mazava isika ankehitriny momba ny fomba hiverenan'i Etazonia sy Eropa amin'ny ambaratonga lehibe kokoa. Ny isan'ny aretina sy ny tahan'ny vaksiny miakatra dia mamela fiakarana am-pitandremana amin'ny dia an-dranomasina transatlantika. Koa satria misy firenena eoropeanina sasany efa nanao fanambarana mifanaraka amin'izany, dia mila drafitra hanokafana ny dia an-dranomasina transatlantic koa i Alemana. ”